“မနက်ခင်းစောစောမှာ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ရလို့ ပျော်ရွှင်မြူးနေတဲ့ မြင့်မြတ်သားလေးမြတ်သူ” - Cele Connections
“မနက်ခင်းစောစောမှာ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ရလို့ ပျော်ရွှင်မြူးနေတဲ့ မြင့်မြတ်သားလေးမြတ်သူ”
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားမြင့်မြတ်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြီး အပိုအလိုမရှိ ပကတိအတိုင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်တတ်တာကြောင့် မြင့်မြတ်ကို ယောက်ျားလေးပရိသတ် အများစုက အားပေးချစ်ခင်ကြပါတယ်..။ အက်ရှင်ကာရိုတာတွေကိုလည်း အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်ကဏ္ဍက မဆိုပါဝင်လုပ်ဆောင်တတ်သူ တစ်ဦးပါ.။
အနုပညာသမားအချင်းချင်းကတောင် လေးစားချစ်ခင် ရတဲ့အထိ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ လက်ရှိမှာ ချောမောတဲ့ ဇနီးနဲ့အတူ ချစ်စဖွယ် သားလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မြင့်မြတ်ရဲ့ သားလေး မြတ်သူလေးဟာလည်း အဖေနဲ့တူပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်ကလေးလေး ဖြစ်လို့ နေပါပြီ..။ သားလေးမြတ်သူရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မြင့်မြတ်ရဲ့ မန်နေဂျာအကောင့်ကနေ အမြဲ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်.။
ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၄)ရက်နေ့မှာတော့ မြတ်သူလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မနက်ခင်းပုံရိပ်လေးတွေကို “Now. မင်္ဂလာရှိသောနံနက်ခင်မှာ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်နေတဲ့. Chit tone kyi myat thu” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ မနက်စောစောလေးမှာ အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်ရလို့ အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ မြတ်သူလေးကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ မြတ်သူလေးရဲ့ မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
“မနကျခငျးစောစောမှာ အပွငျထှကျ လမျးလြှောကျရလို့ ပြျောရှငျမွူးနတေဲ့ မွငျ့မွတျသားလေးမွတျသူ”
မွနျမာနိငျငံရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ မငျးသားမွငျ့မွတျကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ..။ ကာရိုကျတာတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျပွီး အပိုအလိုမရှိ ပကတိအတိုငျး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနထေိုငျတတျတာကွောငျ့ မွငျ့မွတျကို ယောကျြားလေးပရိသတျ အမြားစုက အားပေးခဈြခငျကွပါတယျ..။ အကျရှငျကာရိုတာတှကေိုလညျး အမိုကျစား သရုပျဆောငျနိုငျပွီး အနုပညာနဲ့ ပတျသကျရငျ ဘယျကဏ်ဍက မဆိုပါဝငျလုပျဆောငျတတျသူ တဈဦးပါ.။
အနုပညာသမားအခငျြးခငျြးကတောငျ လေးစားခဈြခငျ ရတဲ့အထိ လူခဈြလူခငျပေါမြားတဲ့သူတဈယောကျပါ..။ လကျရှိမှာ ခြောမောတဲ့ ဇနီးနဲ့အတူ ခဈြစဖှယျ သားလေးကိုပါ ပိုငျဆိုငျထားပွီး ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုငျဆိုငျ ဖွတျသနျးနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ မွငျ့မွတျရဲ့ သားလေး မွတျသူလေးဟာလညျး အဖနေဲ့တူပွီး ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျောကလေးလေး ဖွဈလို့ နပေါပွီ..။ သားလေးမွတျသူရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို မွငျ့မွတျရဲ့ မနျနဂြောအကောငျ့ကနေ အမွဲ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ.။
ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၄)ရကျနမှေ့ာတော့ မွတျသူလေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ မနကျခငျးပုံရိပျလေးတှကေို “Now. မင်ျဂလာရှိသောနံနကျခငျမှာ လမျးလြှောကျရတာ ပြျောနတေဲ့. Chit tone kyi myat thu” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ မနကျစောစောလေးမှာ အပွငျထှကျ လမျးလြှောကျရလို့ အပြျောကွီးပြျောနတေဲ့ မွတျသူလေးကတော့ ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ မွတျသူလေးရဲ့ မနကျခငျးလမျးလြှောကျနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော..။
ငယ်ငယ်ကတည်းက မိသားစုအပေါ် တာဝန်မကျေပဲ အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်တဲ့ ဖခင်ကြောင့် အဖေဘက်ကအဘွားကို သံယောဇဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဇေရဲထက်
“အမြဲအနားကပ်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရွှေထူးကို သဝန်မတိုတိုအောင်စနောက်လိုက်တဲ့ရွှေမှုံရတီ”
မေမေ့စိတ်တိုင်းကျ ဆင်မြန်းပေးထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်ရဲ့သမီးလေး Scarlett ရဲ့ ဗီဒီယို
သူမရှိရာ ရှုတင်နေရာထိလိုက်လာပြီး လာအားပေးတဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေကြောင့် ဝမ်းသာသွားခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ ဗီဒီယို